Ababoneleli besixhobo seSolar PV abaXhasi kunye neMveliso - abavelisi besixhobo seSolar PV China
Isinxibelelanisi sePaneli yeSolar ye-MC4 ine-DC 1000V TUV Umsebenzi ovunyiweyo wenkqubo yePV yokudibanisa iphaneli yelanga kunye nebhokisi yokudibanisa. Umnxibelelanisi weMC4 uyahambelana noMnxibelelanisi weMultic, iAmphenol H4 kunye nabanye abathengisi be-MC4, banokulungela iingcingo zelanga ukuya ku-2,5mm, 4mm kunye no-6mm. Inzuzo ikhawuleza kwaye inonxibelelwano oluthembekileyo, ukumelana ne-UV kunye ne-IP67 yokungena kwamanzi, inokusebenza ngaphandle kangange-25years.
Unxibelelaniso olwahlukeneyo 4 Isinxibelelanisi seCable Solar 1500V 50A sisetyenziselwa ukudibanisa iphaneli yelanga kunye ne-Inverter kwisikhululo samandla elanga. Umnxibelelanisi weMC4 uyahambelana noMnxibelelanisi weMultic, Amphenol H4and ezinye iindidi ze-MC4, kwaye zilungele ikhebula elanga, 2,5mm, 4mm kunye no-6mm. Inzuzo yesiXhobo seSolar ngokukhawuleza kwaye inonxibelelwano oluthembekileyo, ukumelana ne-UV kunye nokungangenwa kwamanzi kwe-IP68 enewaranti yobomi engama-25years.
I-MC4 Solar Panel Connector ye-solar cable engu-10mm2 isetyenziswa kwinkqubo yeSolar ukudibanisa iphaneli yelanga kunye neIninter. Umnxibelelanisi weMC4 uyahambelana noMnxibelelanisi weMultic kunye nezinye iintlobo ze-MC4, kwaye ulungele intambo yelanga, 2,5mm, 4mm, 6mm kunye no-10mm. Inzuzo ye-MC4 ngokukhawuleza kwaye inokudityaniswa okunokuthenjwa, ukumelana ne-UV kunye nokungena kwamanzi kwe-IP68, kungasebenza ngaphandle kangangee-25years.
I-10x38mm I-Soluse Fuse Inline ene-1000V MC4 Fuse Inxibelelanisi
I-10x38mm i-solar Fuse Inline holder engu-1000V ye-MC4 Fuse Inxibelelanisi kwinkqubo yeSolar PV ukukhusela umthwalo ongaphezulu ngoku kwipaneli yelanga kunye ne-Inverter. I-10x38mm Soluse Fuse Qhagamshela iyahambelana noMultic Qhakamshelwano kunye nezinye iindidi ze-MC4, kwaye ilungele intambo yelanga, 2,5mm, 4mm kunye no-6mm. Inzuzo yi-inline fuse inokutshintshwa, ngokukhawuleza kunye nokuxhumeka okuqinisekileyo, ukuxhathisa kwe-UV kunye nokungena kwamanzi kwe-IP67, kungasebenza ngaphandle kangange-25years.
Isinxibelelanisi seSolar Inverter ye-MC4 M12 PV Iphaneli yePaneli yomsebenzi kwisikhululo solar ukudibanisa iphaneli yelanga kunye ne-Inverter. Umnxibelelanisi weMC4 uyahambelana noMnxibelelanisi weMultic kunye nezinye ii-MC4, kwaye zilungele intambo yelanga, 2,5mm, 4mm kunye no-6mm. Inzuzo ikhawuleza kwaye inonxibelelwano oluthembekileyo, ukuxhathisa kwe-UV kunye nokuhamba kwamanzi kwi-IP67, inokusebenza kwi-inverter, ibhokisi yokulawula kunye nangaphandle kwi-25years.
I-MC4 Isinxibelelanisi seDaydi yelanga yoNxibelelwano lwePaneli yoLanga
I-MC4 Solar Diode Sixhumanisi soNxibelelaniso lwePaneli yoLanga isetyenziselwa iPV Prevent Reverse DIODE MODULE kunye nenkqubo yeSolar PV ukukhusela i-backflow yangoku kwipaneli yelanga kunye ne-Inverter. I-CD4 Diode Connector iyahambelana noMultic Qhakamshelwano kunye nezinye iindidi ze-MC4, kwaye ilungele intambo yelanga, 2,5mm, 4mm kunye no-6mm. Inzuzo ikhawuleza kwaye inonxibelelwano oluthembekileyo, ukumelana ne-UV kunye ne-IP67 yokungena kwamanzi, inokusebenza ngaphandle kangange-25years.